Belguim oo joojisay xafladii Sanadka-cusub ee Brussels arrimo Amni awgood - iftineducation.com
iftineducation.com – Maamulka Caasimada Belguim ee Brussels ayaa sheegay in la joojiyey xafladihii habeenka sanadka cusub (Caawa) ka dhici lahaa fagaarayaasha waaweyn ee magaaladaasi.
Arrintan ayaa la xariirta cabsi laga qabo weeraro argagaxiso oo dalkaasi ka dhaca.
Salaasadii ayaa sare loo qaaday heeganka ciidamada dalkaasi si ay uga hortagaan weeraro la sheegay inay qorsheenayaan kooxaha argagaxisada.
Ragga la qabtay ayaa la sheegay inay xubno ka ahaayeen kooxda loo yaqaan (Shariica For Belguim) oo horey dalkaasi looga mamanuucay.
Dowlada Belguim ayaa ciidamada militariga keentay caasimada Brussels si ay gacanta u siiyaan ciidamada Booliiska.
Wadamo badan oo caawa looga dabaal-degayo sanadka cusub ayaa la sheegay in sare loo qaaday roondooyinka iyo feejignaanta ciidamada amniga.